बजारलाई नयाँ ढंगले व्यवस्थापन नगरी किसानलाई खुसी बनाउन सकिँदैन : मन्त्री अर्याल
नेपाल लाइभ सोमबार, पुस २०, २०७७, १७:०६
काठमाडौं– कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले किसानलाई खुसी बनाउनका निम्ती बजारलाई नयाँ ढंगले व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताएकी छन्।
मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका संस्थान, समितिहरुको छलफलका क्रममा आयोजित कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै मन्त्री अर्यालले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएकी हुन्।
मन्त्री अर्यालले किसानले बजारमा ल्याएको तरकारीको डोको फर्काएर लैजानुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका निम्ति नयाँ ढंगले बजारको व्यवस्थापन आवश्यक रहेको बताइन्।
‘बजारलाई नयाँ ढंगले व्यवस्थित नगरिकन किसानहरुलाई खुसी बनाउन सकिदैन’, मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘तर किसानहरुले बजारमा ल्याएको वस्तु फर्काएर लैजाने स्थिति राम्रो होइन। दुध उत्पादन गर्‍यो‚ सडकमा पोख्नुपर्ने यो धेरै गम्भीर कुरा हो। मान्छेलाई निराश बनाउने ऋण थपाउने कुरा राम्रो होइन।’
बजारको ग्यारेन्टी गर्नेगरी नयाँ ढंगले जानुपर्ने भन्दै उनले हिजोको परम्परावादी योजना, सोचले अब अगाडि बढ्न नसकिने बताइन्।
मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘आजको आवश्यकताहरु पुर्ति गर्नेगरी जानुपर्‍यो। आजका समस्या के हुन्? आजका समस्या समाधान गर्न के गर्ने भन्ने हिसाबले गहन अध्ययन गरेर जाऔं।’
आफ्नो कार्यकालमा केही नयाँ गर्नेगरी जान कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै मन्त्री अर्यालले हिजोको नेतृत्वले जे गर्‍यो त्यसको निरन्तरतामात्र आजको आवश्यकता नभएको बताइन्।
सरकारले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी ३ खालको बजारको परिकल्पना गरेको बताउँदै मन्त्री अर्यालले कस्ता बजारलाई कुन बजारमा राख्ने भन्ने ढंगले मापदण्ड बनाउन निर्देशन दिइन्।
‘कस्तालाई कुन बजारमा राख्ने? तपाईंहरु मापदण्ड बनाउनुस्। यसलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी जाऔं। किसानलाई उत्साहित बनाउन यो कार्य जरुरी छ’, मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘हाम्रो बजार हाम्रो हातमा छैन। कोभिडका बेला किसानहरुले तरकारी, फलफूल उत्पादन गरे। काठमाडौं आइपुग्दा हाम्रो बजार त अर्कैले कब्जा गरिसकेको छ। अनि किसानहरु फर्केर जाने स्थिति बन्यो।
बजारको वर्गीकरण गरेर ल्याउनुस्। हाम्रो बजार हाम्रो हातमा नलिई किसानहरुको हित हुँदै हुँदैन। योजना लिएर आउनुस्। आजसम्मको तपाईंहरुको अध्ययनले के भन्छ?’
कालिमाटी, फलफूल तथा तरकारी बजारका सन्दर्भमा कर्मचारीहरुले नै बजार कब्जा गरेर बसेको भन्ने गुनासो आइरहेको भन्दै मन्त्री अर्यालले त्यसबारेमा रिपोर्ट ल्याउन कर्मचारीलाई निर्देशन दिएकी छन्।
प्रचण्ड–माधव समूहले आजदेखि माइतीघरमा साताव्यापी धर्ना दिने
खोप अभियान निरीक्षण गर्न प्रधानमन्त्री ओली शिक्षण अस्पताल पुगे
पूरै भुक्तानी नभएको भन्दै उखु किसानले फेरि सुरु गरे आन्दोलन उखु किसान संघर्ष समितिले पटक पटक उद्योग तथा उद्योगीहरुसंग विवरण माग गर्दा समेत उद्योग तथा उद्योगीहरुले संघर्ष समितिलाई सो विवरण उपलब... बिहीबार, माघ ८, २०७७
किसान क्रेडिट कार्ड र कृषि ऋणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था आजबाट कार्यान्वयनमा चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिएको किसान क्रेडिट कार्ड र कृषि ऋणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था बुधबारबाट कार्यान्वयन... बुधबार, माघ ७, २०७७
रासायनिक मल कारखाना स्थापना तयारीसम्बन्धी गृहकार्य सुरू अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्माकुमारी अर्याल र... बुधबार, माघ ७, २०७७